Araka ny fantatrao, ny vanim-potoan-tsarotra voalohany indrindra amin'ny bevohoka manontolo dia ny fitrandrahana. Raha ny marina dia manomboka ny fampijaliana. Noho io tranga io dia maro ireo reny, rehefa avy nianatra momba ny toe-drainy, dia liana amin'ny: inona ireo famantarana fa efa vita ny fametrahana ny embryon ao amin'ny tranonjaza. Andao hiezaka hahatakatra io olana io.
Rahoviana ny fampidirana ny embryon ao amin'ny moka uterine ara-dalàna?
Alohan'ny hiantsoana ireo mari-pamantarana fototra fanorenana embryon, dia ilaina ny mamaritra ny teny misy ny fitsipika arahin'ny fitsipika nomena ao amin'ny taova iray momba ny moma ho avy.
Raha ny fitsipi-pitondran-tena amin'ny fanenana ny embryon mankany amin'ny rindrin'ny tranonjaza, amin'ny fitsipika, mandritra ny 7-10 andro. Manana adina 40 ora ny dingana.
Tsara ny manamarika fa azo atao ny mamboly aloha sy ny farany. Ny karazana embryon farany amin'ny fampidirana ao amin'ny rindrin'ny tranonjaza dia lazaina avy eo, raha mitranga izany rehefa avy 10 andro manomboka amin'ny fotoana fametrahana.
Ahoana no hamaritra ny fotoam-pambolena?
Avy hatrany dia ilaina ny milaza fa tsy mety ny vehivavy rehetra amin'ny toe-javatra hahafantarana manokana ny fananganana embryon araka ny fahatsapana fotsiny sy ny soritr'aretina. Mba hanamafisana io zava-misy io dia tsy maintsy atao ny ultrasound.
Na izany aza, na dia eo aza ny vehivavy rehetra, indrindra ireo izay mikasa ny bevohoka mandritra ny fotoana lava, dia mihaino ny fahatsapan'izy ireo ary miezaka ny mamantatra ny famantarana ny fambolena embryon, izay mitranga dia 1-1.5 herinandro aorian'ny fampiraisana. Azon'izy ireo atao ny mitondra:
neobylye miposaka mavokely mena na volomparasy;
mampihetsi-po amin'ny kibo ambany;
mitabataba ao amin'ny vinaingitra;
ny endriky ny zava-poana;
Mihabetsaka ny fitomboan'ny vatana;
fiovan'ny toetr'andro, herim-po, mahatsiravina.
Ireo famantarana ireo ihany koa dia voamarina amin'ny famaranana ny embryon. Na izany aza, amin'ny tranga toy izany dia mety ho diso ny fotoana fisehoan'ny ran'ny vehivavy iray izay tsy mahatsikaritra ny fahasalamany. Mba hamaritana ny atao hoe: ny fitondrana vohoka na ny fanitsakitsahana ny fihodinan'ny bisikileta, dia ampy ny manao fitsapam-pahaizana manokana ary mitady ny torohevitry ny tovovavy.
Inona avy ireo marika momba ny fanorenana embryon aorian'ny IVF?
Tsara ny manamarika fa tsy voamarik'io ny fimamoana manintona ny soritr'aretina rehetra, izay azo heverina ho vita amin'ny fambolena. Ny endriky ny tsy fitoviana, ny fahalemena amin'ny toe-javatra toy izany dia mifandray mivantana amin'ny toe-tsaina ara-psikolojik'ilay vehivavy, ny fahatsapany mikasika ny fahombiazan'ny fomba fanao.
Inona ireo famantarana voalohany amin'ny fitondrana vohoka?
Mametraka ny embryon ho an'ny tranonjaza - famantarana
Voan'ny trondro madinika - fahadisoana amin'ny ultrasound?
Betadine amin'ny fitondrana vohoka
Hypoxia ny foetus
Firy andro aorian'ny fiterahana no manomboka ny fitondrana vohoka?
Malemy be ny aty amin'ny bevohoka, toy ny isam-bolana
Ahoana ny fandondonana ny hafanana mandritra ny fitondrana vohoka?
Sakafo amin'ny legioma
Ahoana ny fomba famonosana ny rivotra ao amin'ny trano iray - ny fomba tsotra sy mahasoa indrindra
Hiantsena any Ghent, Belzika
Volo manjelanjelatra ao an-trano
Ao amin'ny aloky ny Duchesse of Cambridge: 10 zavatra mahaliana momba an'i Pippa Middleton
Victoria Beckham nanazava ny fiverenany any amin'ny Spice Girls ary nahafaly ilay lalana vaovao
Astenozoospermia - fitsaboana
Ny kapa hoditra amin'ny vehivavy
Jiromita fohy - amin'ny inona no tokony hitafy sy ny fomba hamoronana sary hoso-doko?
Ranomaso amoron-dranomasina - fananana mahasoa sy fanoherana
Iza no hofidiana?
Fanamboarana polisy hoditra
Trondro amin'ny teny grika
Ny kamboty Miranda Kerr sy ny kintana hafa ao amin'ny "Golden Globe" dia lany tamingana
Fifanakalozan-kevitra - votoaty sy fikarakarana, fitsipika manan-danja ho an'ny aquarists